Buugaagta Thermorecetas - buugaagta cuntada loogu talagalay Thermomix
Buugaagta cuntada ee Thermomix: dhammaan buugaagta Thermomix
At Thermorecetas waxaan ku diyaarinay taxane ah buugaag ku baran doonta sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo Thermomix-kaaga. Dhammaantood waxaad ka heli doontaa cuntooyin gaar ah oo lagu kariyo suxuunta aadka u macaan leh oo aad kula yaabi karto qoyskaaga iyo asxaabtaada. Waxaan sii wadi doonaa ka shaqeynta buugaagta cusub, La soco!
- Muuji cuntooyinka 2: cuntooyinka ka yar 30 ′
40 cuntada cusub oo leh suxuunta waaweyn ee macaan, dhinacyada layaabka leh iyo macmacaan qurux badan oo ku diyaarsan wax ka yar 30 daqiiqo oo ku habboon dhammaan xubnaha qoyska. [Macluumaad dheeraad ah]
- 40 cunto oo macmacaan leh Thermomix
40 suxuun cajiin oo heer sare ah oo leh keega, muufada iyo bundtcakes, iyo sidoo kale crostatas, jajabka, buskudka iyo rootiga la dubo iyo xulasho badan oo keeg ah iyo noocyo kala duwan. [Macluumaad dheeraad ah]
- Buug caafimaad leh oo leh 'Thermomix'
100 cunto oo loogu talagalay cunto caafimaad leh oo miisaaman, oo 40 kamid ah ay yihiin kuwa ugu guusha badan barta iyo 60-ka soo hartay gabi ahaanba lama daabicin. [Macluumaad dheeraad ah]
- Buugga cuntada ee Thermomix
Buuggan waxaad ka heli kartaa 100 cuntada lagu kariyo oo lagu diyaariyo Thermomix-kaaga kaas oo aad uga yaabi doontid asxaabtaada iyo qoyskaaga. [Macluumaad dheeraad ah]
- Ku muuji cuntada sida la socota Thermomix
Loogu talagalay dhammaan dadkaas aan waqtiga haysan ee aan doonayn inay quustaan cunto dhameystiran, caafimaad leh oo miisaaman. [Macluumaad dheeraad ah]
- Cunnooyinka gaarka ah ee leh Thermomix
32 cunto oo loogu talagalay dadka qaba dulqaad la'aanta cuntada ama yaa doorbida inuu raaco cuntooyinka gaarka ah sida khudradda ama khudradda. [Macluumaad dheeraad ah]
- Buug-qorista iyo Karinta buugga midnimada
39 cuntada loogu talagalay caawin Caawinta Caalamiga ah ee HelpAge si loo maalgeliyo mashaariicdooda ay ka wadaan Itoobiya lana dagaallamaan gaajada iyo saboolnimada. [Macluumaad dheeraad ah]
- Cunnooyinka kirismaska ​​ee loogu talagalay Thermomix
ka cuntada ugu wanaagsan ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Thermomix ayaa ka soo muuqday baloogga hadda waxaa lagu soo uruuriyay ebook la soo dejin karo oo gebi ahaanba bilaash ah.
Waad soo dejisan kartaa buugga cuntada ee kirismaska gebi ahaanba bilaash kaliya adoo naga caawinaya inaan kula wadaagno baraha bulshada.
Waan aqbalay shuruudaha
Hadaad inbadan raadinayso Buugaagta Thermomix Boggan waxaad ka heli doontaa dhammaan buugaagteena buugaagta, buugaag qaab muuqaal ah iyo buugaagta rasmiga ah ee Thermomix ee ay daabacday Vorwerk.